यस्तो छ दाङ -३ को पछिल्लो मतपरिणाम, कसले बाजी मार्ला ? « Postpati – News For All
मङ्सिर १५, काठमाडौँ । शनिबार भएको उप-निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यका लागि दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) को मतगणना जारी छ । प्रारम्भिक मतगणनामा नेकपाकी उम्मेदार विमला कुमारी खत्रीले अग्रता कायमै राखेकी छिन् ।
उनी कांग्रेस उम्मेदवार भन्दा १,०७७ मतले अघि छिन् । बबई गाउँपालिका १ र तुलसीपुर उपमहानागरपालिका १ वडाको ६९४३ मत गणना हुँदा खत्री नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार केशव राज शर्माभन्दा अघि छिन्।
कांग्रेस उम्मेदवार केशवले २,८३६ मत प्राप्त गरेका छन्। ९८ मत बदर भएका छन् ।
यी दुबै वडा नेकपाले स्थानीय निर्वाचनमा जितेका वडा हुन्। आइतबार बिहान सवा ९ बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो।
नेकपाले र कांग्रेसले यसअघि जितेको कहाँ हारे, नयाँ कहाँ जिते ?
शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचन अन्तर्गत स्थानीय तहका ४३ वडा अध्यक्षहरुमध्ये अधिकांश स्थानको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
जसमा सत्तारुढ दल नेकपाले २२ स्थानमा जीत हात पारेर अग्रता कायम गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ११ वडा अध्यक्षमा जीत हात पारेको छ । त्यसतै राजपाले ३ र समाजवादीले ३ वडा अध्यक्षमा जीत हात पारेका छन् ।
यसअघि भएको निर्वाचनमा जितेको ८ स्थान सत्तारुढ दल नेकपाले गुमाएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेले जितेको २१ र तत्कालिन माआवादी केन्द्रले जितेको २ वडासमेत गरि २३ वडामध्ये नेकपाले ८ वटा वडा गुमाएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले पनि यसअघि जितेका ८ वडा गुमाएको छ । कांग्रेसले गुमाएको वडाहरु नेकपाले हात पारेको छ ।
नेकपाले उपचुनावमा कांग्रेसले यस अघि जित निकालेका इन्द्रावती ८ सिन्धुपाल्चोक , फिदिम १ पाँचथर, पौवादुम्मा १ भोजपुर, कल्याणपुर १२ सिरहा, , कोहलपुर ६ बाँके, थवाङ १ रोल्पा, मेल्लेख ५ अछाम, त्रिवेणी १ बाजुरामा जितेको छ । यस्तै नेकपाले यसअघि जितेको हिलिहाङ ७ पाँचथर,धनपालथाम २ मोरङ,हरिपुर्वा १ सर्लाही, भरतपुर १६, मालारानी ३ अर्घाखाची, घोराही १६ दाङ, दोगडा केदार ४ बैतडी, पुर्चौडी ४ बैतडी गुमाएको छ जसमा कांग्रेसले जितेको छ ।
पाँचथर हिलिहाङ गापा–७ मा तिलविक्रम इधिङ्गो, महोत्तरी बलवा नपा–२ मा विपिन पजियार सुडी, रौतहट गढीमाई नपा–२ मा दीपेन्द्र श्रेष्ठ, चितवन भरतपुर मनपा–१६ मा अमृतराज हमाल, खैरहनी नपा–४ मा देवबहादुर बस्नेत, सोही नपा–५ मा प्रतिमा कार्की, बैतडी दोगडाकेदार गापा–४ मा सुरेन्द्रप्रसाद भट्ट, अर्घाखाँची मालारानी गापा–३ मा शोभाखर खनाल, दाङ घोराही उपनपा–१६ मा ताराबहादुृर डिसी र मोरङ धनपालथान गापा–२ मा नेपाली काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेदवार नारायणप्रसाद साह निर्वाचित भएक हुन् ।